Mitambo nemashandisirwo emahara kana kutengeswa kwenguva yakati wandei (Ndira 8) | IPhone nhau
Mitambo nemashandisirwo emahara kana kutengeswa kwenguva yakati wandei (Ndira 8)
Ini ndinoda ichi chinhu nezve kutsvaga yemahara mitambo uye kunyorera kwe iPhone ne iPad. Zvakanaka, yemahara kana, zvirinani, ine inotapira dhisikaundi. Ichokwadi kuti muzviitiko zvakawanda iwo maapplication atisiri kuzoshandisa kana atisingazodi. Asi, ngatitarisei izvi: kurodha pasi uye kuyedza mitambo uye kunyorera pane edu maIOS zvishandiso watove mutambo wega izvo zvinotivaraidza mumaawa akafa.
Usakanganwa kuti zvese izvi zvinopihwa zvandiri kuzokuratidza pazasi ndeizvi Nguva YakatemwaIzvi zvinoreva kuti ini ndinogona kungovimbisa chete kuti vari kushanda panguva yekutsikisa ichi posvo, asi isu hatizive kuti vachashanda kwenguva yakareba sei nekuti vanogadzira havataure nazvo. Naizvozvo, kana mutambo kana app ichikufadza, mhanya iyo, uye gare gare unogona kuongorora kana iwe ukaichengeta kana uchida kuidzorera.
1 MyBrushes ye iPhone
2 TextCode - Code Edhiyo neGitHub Repository
3 Lily Farm Animal Premium Zvidimbu
4 Mercantile Exchange - chigadzirwa mutambo wekutengesa
7 DADA Zvitima
8 Yemazuva ano Labyrinth
MyBrushes ye iPhone
Kana iwe uchida penda uye dhonza, MyBrushes ye iPhone uchaida, uye zvakatonyanya izvozvi sezvo mahara.
MyBrushes ndeye yakasarudzika pendi yekushandisa yakagadzirirwa kugadzira mifananidzo uye kubereka iyo yese yekupenda maitiro. Iyo ine 100 mhando dzechokwadi brashi masitaira ekuteedzera zvinoitika zvebrashi kupenda, mvuracolor kupenda, mafuta kupenda, Chinese pendi, kudhirowa, Chinese calligraphy, nezvimwe.
Zvisinei nezita rayo, Anwendung ichi inowirirana iPhone, iPad uye iPod touch. Mutengo wadzo wenguva dzose ndi0,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
TextCode - Code Edhiyo neGitHub Repository
Mune ino kesi isu tiri kutarisana nechikumbiro chakanangidzirwa kune vanogadzira; TextCode inokurumidza, isingaremi uye iri nyore kushandisa kodhi, zvinyorwa, markup edhita. "Ndiyo nzira yakanaka yekutarisa mafaera ekodhi mubhazi, chitima, uye ndege."
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana ine 66% dhisikaundi ye € 0,99 chete, kwenguva pfupi.
Lily Farm Animal Premium Zvidimbu
Lily's Animal Farm mutambo wekudzidzisa kune mudiki wemba kusvika pamakore mashanu ezera uye wakagadzika munzvimbo yepanyama yepurazi mune mhuka, zvirimwa, nezvimwe.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Mercantile Exchange - chigadzirwa mutambo wekutengesa
«Mercantile Exchange iri chigadzirwa kutengesa mutambo. Vatambi vanofanirwa kukunda vanopikisana navo nekugadzira nzira dzavo uye kuyedza kupfuma nekutengesa zvigadzirwa. "
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana ne33% dhisikaundi ye € 1,99 chete, kwenguva pfupi.
«Mhepo iri chiridzwa chemumhanzil inoshanda zvakakwana uye inofambidzana »izvo zvinokutendera iwe kuimba chero rwiyo pane yako iPhone kana iPad kunyangwe iwe usina ruzivo kana tarenda. Huya, saBritney paunoteerera pasina rubatsiro rwehunyanzvi.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 0,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
"Stock Market mutambo unonakidza unozivisa vatambi nezvekupunzika muStock Market." Uyu ndiwo mumwe mutambo wezvemari apo iwe uchaisa yako yekutaurirana uye emitengo yekushandisa hunyanzvi bvunzo kuti uwane ruoko rwepamusoro pamusoro pevadzivisi vako.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 4,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana ne60% dhisikaundi ye € 1,99 chete, kwenguva pfupi.
Ndicho inodzidzisa hunhu mutambo Inotarisirwa kuvakomana nevasikana vari pakati pemakore matanhatu ne6, vakatarisa "kuongorora nyika inonakidza yezvitima."
Iva nyanzvi, ongorora mashandiro emhepo emota uye dzidza zvikamu zvacho, gadzira yako wega yekuunganidza chitima, gadzira nyaya uchitamba uye nezvimwe zvakawanda. Iyo avant-garde ruzivo rwehukuru hwekudzidzisa kukosha, yakagadzirirwa neDADA Kambani.
Mutengo waro wenguva dzose ndeye 2,99 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana ne66% dhisikaundi ye € 0,99 chete, kwenguva pfupi.
Yemazuva ano Labyrinth
Kuburikidza makumi matatu neshanu anowedzera kuomesa matanho uchafanirwa kufambisa bhora nerubatsiro rwekurerekera kwe iPhone yako A nemazvo mutambo chaizvo kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mitambo nemashandisirwo emahara kana kutengeswa kwenguva yakati wandei (Ndira 8)
Apple kuvhura Apple Store muMilan yakagadzirwa naNorman Foster